Tag: sumadda emailka | Martech Zone
Tag: iimayl sumadeed
Shirkadaha badankood ee diraya emaylku runti way dhayalsan karaan sida wax u gaarsiintu saamayn ugu yeelan karto ururkooda. E-mayl qurux badan, si fiican loo dhisay, oo si aad ah waxtar u leh ayaa ku kici kara galka qashinka ee qof ka mid ah macaamiisha oo raba inuu beddelo shirkaddaada. Taasi waa xaalad aad u xun oo lagu jiro. Xitaa kaba sii darane, xitaa ma ogaan kartid in emayladaada loo sii wado qashin ilaa aad isticmaaleyso aaladda la socodka sanduuqa. Taladayda tan ayaa ah la-hawlgalayaashayada